Waxyaabo Kuuriyada koonfureed akteeda caadi ka ah balse aduun weynaha agtiisa yaab kaleh. (sawiro). – Filimside.net
Waxyaabo Kuuriyada koonfureed akteeda caadi ka ah balse aduun weynaha agtiisa yaab kaleh. (sawiro).
Kuuriyada koonfureed waa wadan kulmiyay tiknooloojiga casriga iyo caadooyinkii hore waxaadna arkeysaa qofkastaa oo booqasho ku tagaa waxyaabo layaab leh oo uu kaaga sheekeynaayo.
Waxaa jiraan arimo badan oo Kuuriyada Koonfureed agteeda wax caadi ka ah balse aduun weynaha agtiisa layaab kaleh.
Waxaan maqaalkaan idiin kuugu soo qaadan doonaa qaar kamid ah waxyaabahaasi layaabka leh.
1-Garab istaaga Dowlada haweenka uurka leh.
Kuuriyada Koonfureed dumarka uurka leh midkasta waxaa lasiiyaa kaar 500 oo dolar kujirto kaasoo ay isticmaali karto mudadii ay uurka leedahay sidoo kale waxay wataan aqoonsi ugaar ah si dadka kale looga dhex sooco markii ay basaska raacayaan waxaana jiraan kuraas fadhi iyaga u gaar ah iyo wadooyin naagaha uurka leh u khaas ah kuwaasoo gawaaridooda ku isticmaalaan.
2-Shaqaalaha TVyada kuuriyaanka waxay xirtaan dharkooda hidaha iyo dhaqanka markii ay u dabaal dagayaan sanad guuradooda.
3-Caruurta yar yare e wax barata waxay xarun kasta oo caruur lagu xanaaneeyo xirtaan dhar iyaga u gaar ah si lamid ah wado iyaga u gaar ah waxaana sidaas loo sameeyay si aysan bulshada u dhex galin caruurta isla markaasna u dhumin.
4-Nimanka iyo naagaha is qaba ee Kuuriyaanka ah waa iney xirtaan labis isku eg si dadka kale looga garto.
5-Qaabka ugu haboon ee aad macalinka ugu mahad celin karto waa adoo siiyo Koob qaxwo ah ama macmacaan yar maadaama dadka wadankaasi kunool laaluushka dambi weyn agtooda kayahay hadiyadaha qaaliga ahna lagu tiriyo nooc kamid ah laaluushka waa inaad macalinkaaga ku marti qaadaa koob Qaxwo ah.
6-Dhalinta kuuriyada koonfureed waxba kalama socdaan waaqica reer galbeed xitaa fanaaniintooda ma yaqaanaan.
7-Shaqaalayaasha iyo shaqooqyinoodaba xuduud malahan heer dowlada ay si qasab ah barnaamijyada Computerada iyo adeegyada Internetka uga joojiso si dadkaasi u helaan waqti ku filan oo ay ku nastaan waayo waaba dad shaqooyinkooda balwad ka dhigtay.
Hadaba akhristow adiga wali ma tagtay Kuuriyada Koonfureed maxaase kuugu yaab badnaa?